समर्थन फिर्ता लिएर देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीले दिए चुनौति, संसदीय समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि – Himalaya Television
समर्थन फिर्ता लिएर देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीले दिए चुनौति, संसदीय समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि
२०७७ चैत २१ गते १६:४९
समर्थन फिर्ता गर राजीनामा आउँछ
२१ चैत २०७७ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन चुनौति दिनुभएको छ ।
आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा आयोजित मुलुकका विभिन्न स्थानका १ सय ६५ वटा रणनैतिक महत्वका सडक शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले समर्थन फिर्ता लिन चुनौति दिनुभएको हो । उहाँले दिनहुँ विभिन्न थरिले आफ्नो राजीनामा माग्ने गरेको उल्लेख गर्दै समर्थन फिर्ता भएपछि राजीनामा दिने बताउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारले आफ्नो ३ बर्षे कार्यकालमा निकै राम्रा र दुरगामी महत्वका काम गरेको भन्दै देश विकासको गतिमा लम्किएको देख्न नचाहने तत्वले सरकारको विरोध गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संसदलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा नभई जनताको आवश्यकता अनुसार चल्ने बनाउनका लागि ताजा जनादेशकमा जानुपर्ने र सोही आवश्यकतालाई हेरेर सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानन्त्री ओलीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन चुनौति दिनुभएको छ । उहाँले आफुलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए राजीनामा दिने बताउनुभयो । उहाँले राजधानीमा मेलम्चीको पानी आएको थाहा नपाउने अखबारले आफ्नो राजीनामा मागिएको समाचार भने दिनहुँ छाप्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “राष्ट्रको लोकप्रिय, बढी बिक्ने बहुत लोकप्रिय भन्ने अखबार काठमाडौमा मेलम्चीको पानी आएको समाचार दिँदैन । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो भनेर, आज माग्या हो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा ? माग्या माग्यै छ त । मागेपिच्छे म कसरी दिनसक्छु ? एक दिन एउटा राजीनामा हुन्छ । एउटाले माग्दैन, एक दिन माग्दैन । मागेको मागेकै छ । हटाउन न त । समर्थन पिर्ता लिइँदेउ भन्छु त्यो पनि लिँदैन । अनि राजीनामा माग्छ । राजीनामा त आइहाल्छ नि समर्थन फिर्ता गर न । समर्थन फिर्ता पनि गर्दैन । राजीनामा माग्छ । दिनैपिच्छे एक एकवटाले राजीनामा माग्छ अनि दिनैपिच्छे राजीनामा मागेको खबर अखबारले छाप्छ तर मेलम्चीको पानी आएको थाहा पाउँदैन ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतामा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रीत गरिए ताजा जनादेशमा जानुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले संसदीय अंकगणित देशको आवश्यकताभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा त्यो अंकगणितलाई परिर्वतन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने दाबी गर्नुभयो । देश र जनतको आवश्यकताका लागि संसदको अंकगणित परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले आफुले संसद विघटन गरेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “संसद यस्तै हो । कहिले देशको आवश्यकता र संसदको गणित फरक पर्छ । कहिले कृतिम ढंगले केही मान्छेहरुले संसदीय अंकगणितलाई यताबाट उता, उताबाट यता सारिदिन्छन् । मिलाई दिन्छन् । संसदीय अंकगणितले राष्ट्रिय आवश्यकताको सधै प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सकिँदैन । त्यस्तो भयो भने सार्वभौम जनताबाट संसदीय अंकगणित यदि अनुपयुक्त ढंगले त्यहाँ खेल भइरहेको छ र अनुपयुक्त आकार लिइरहेको अवस्थामा संसदीय अंकगणित देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता र अनुकुलताका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ । पोलिटिक्स त्यो हो । कसैको स्वार्थ केन्द्रीत, स्वार्थ निर्देशित होइन । देश,जनता र विकासको आवश्यकता अनुसारको अंकगणित हामीले जनप्रतिधि संस्थाहरुमा निर्माण गर्नुपर्छ र खासगरि संसदमा, जो सरकार बनाउने, संविधान संशोधन गर्न सक्ने, कानून निर्माण र परिवर्तन गर्न सक्ने थलो हो । त्यस थलोलाई देशको आवश्यकता अनुसारको अंकगणितीय बनावटमा लैजानुपर्छ । यदि व्यवस्थापन भएन र विभिन्न तत्व र व्यक्तिका स्वार्थहरुको खेलबाट अंकगणित आवश्यकताविपरीत गयो भने ताजा जनादेशमा जानुपर्छ । हामीले गरेको विघटन त्यही गर्नका लागि हो ।”
उहाँले भन्नुभयो “के हो तानाशाही भनेको ? फासीवाद भनेको शब्द बुझेर बोलेको हो कि नबुझी बोलेको हो ? के हो फासीवाद भनेको ? जसले फासीवाद छ अहिले भने, त्यही मान्छेले फासीवाद ल्याउन खोजेका थिए । संविधानले शान्तिपूर्ण परिर्वतनको बाटो दिएपछि पनि जनताको अभिमत, जनताका बीचमा जाने कानूनी र प्रणलीगत व्यवस्था खुल्ला भएपछि पनि जनतालाई भड्काएर, उचालेर लोकतन्त्रका विरुद्ध केही गर्नुपर्ने आवश्यकताको नेतृत्व जो मान्छेले गर्छ , लोकतन्त्रका विरुद्ध उसैले भन्छ कि फासीवाद, तानाशाही, अधिनायकवाद भो । नबुझेर बोल्या जस्तो लाग्यो मलाई । यस्ता भ्रमपूर्ण कुराबाट भ्रमित हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । ”
संसदीय समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि
प्रधानन्त्री ओलीले संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको दोश्रो प्याकेजको प्रिक्वालिफिकेसन प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई दिएको निर्देशन प्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । उहाँले संसदीय समितिहरुले अन्धाधुन्ध ढंगले छानबिन गर्ने र निर्क्योल नहुँदै काम रोक्न निर्देशन दिने गरेको भन्दै त्यसो नगर्न सचेत गराउनुभयो । विकास निर्माणका काममा अवरोध हुँदा त्यसले बहुआयामिक क्षति पुराउने भन्दै त्यसतर्फ सवै जिम्मेवार निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “हामीले एउटा काम रोक्ने आदेश दियौं भने त्यसले के के ठाउँमा र कति समय असर पार्दछ ? त्यसले कार्यसम्पादन गर्ने समयलाई कति पर धकेल्छ ? त्यो काम सम्पन्न हुन कति पछि मात्र संभव छ ? त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति र विकासमा पार्ने प्रतिकुल असर, यो सबै कुराहरुलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ । संसदीय समितिले अन्धाधुन्ध ढंगले एउटाले पनि बोलाएको छ छानबिन गरेको छ । अर्कोले पनि आदेश गरेको छ । उसले पनि आदेश गरेको छ । अर्कोले पनि आदेश गरेको छ । त्यसैमा अनेक समितिले छानबिन गर्छ । अनेक समितिले आदेश दिन्छ र काम हुनुभन्दा पहिले… आफ्ना क्षेत्राधिकार र आफ्ना कामको असरलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक हामीले ध्यान दिनुपर्छ । संसदीय समितिले सडक नबनाउँ पुल नबनाउ भनेर आदेश त दिन्छौ तर त्यसको असर अर्थतन्त्रमा के हुन्छ ? अनियमितता भएको छ भन्ने लाग्छ भने समितिलाई ,सम्बन्धित ठाउँलाई यसलाई हेर्नु भनेर लेखिदिए हुन्छ तर काम रोक्ने कुरा अरबौको आयोजना रोकेर फेरि गर्दा त्यसले पार्ने असर र परिणाम हेर्नुपर्छ । ”
राज्यका अधिकार प्राप्त निकायले स्थलगत आदेश दिँदा विकास निर्माणका कामहरुमा प्रतिकुल असर पर्न नहुने र काम चालु राखेर छानबिन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालतर्फ लक्षित गर्दै विषाक्तपूर्ण राजनीति गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले नेपाली उखान उधृत गर्दै सरकारले गरेका राम्रा काम नदेखेको भन्दै व्यंग्य गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले भनेका छन् नि दर्शन किन्तु कहीँ दिँदैन चर्मचक्षुले कानमा । आँखा छ तर आँखा भएर के गर्ने ? देख्न नखोजेपछि । केही पनि भएको देख्दैन । सिन्को भाँचिएको देख्दैनन् केही मान्छेहरु । र अत्यन्तै विषाक्त राजनीति । समाजलाई विषाक्त बनाउने अनि भाड्ने प्रयास केही मान्छेहरुले गरिराखेका छन् । यहाँ त फासिवाद आइसक्यो । अधिनायकवाद, यहाँ तानाशाही आइसक्यो । यस्तो केही मान्छेहरु गर्छन् । ती कामको चर्चा गर्दैनन् । म त्यो कथा दोहोराउन चाहन्नँ एउटा जनावर स्वर्ग गएछ । चौरासी व्यञ्जन दिएको, नखाइकन पल्ला छेउ पुग्यो । यो भन्दा बढी म भन्न चाहन्नँ । ”
ओली प्रधानमन्त्री समर्थन संसदीय समिति